myMail fampiharana mailaka tena mahaliana | Vaovao IPhone
Omaly izahay dia niresaka momba ny Boxer, fampiharana mailaka tsara izay mamela apetaho ny karazana rakitra rehetra ao anaty rahonaNa antontan-taratasy PDF, rakitra Word na sary.
Androany izahay dia manolotra ny myMail, fampiharana mailaka maimaim-poana misy ho an'ny iPad sy iPhone. Tsy toy ny rindranasa hafa toa ny Gmail na Mailbox, izay mifantoka amin'ny mailaka Google fotsiny, myMail Manohana ny kaonty Gmail, AOL, Yahoo, iCloud, Outlook, Hotmail ary koa ny kaonty IMAP / POP3..
myMail dia iray amin'ireo fampiharana mailaka vitsivitsy izay nohaingoina tsara mba hiasa amin'ny iPad sy iPhone. Ny ampahan'ny interface-n'ny mpampiasa azy, toy ny tontonana fitetezana, dia mampatsiahy antsika ny fampiharana Gmail, na dia ny fampifangaroana ny loko sy ny sary masina ampiasaina dia mampiavaka azy tanteraka.
Mitantana ny fampiharana somary intuitive ary mitovy amin'ny mpanjifa mailaka rehetra. Raha te hahafantatra mora kokoa ilay olona mandefa anay ny mail, dia ampiasain'ny myMail ireo sary izay efa notehirizinay tao anaty ireo fifandraisana, na raha mamela anay hanisy sarin'ny tenanay ny mpizara mailaka anay, dia haseho ao anaty boaty eo akaikin'ny tranonkalantsika izany. mail. Tsy ilaina, toy ny amin'ny mailaka hafa, ny mampifandray ny kaonty amin'ny Facebook mba hametrahana endrika an'ireo mailaka.
Avy amin'ny boaty, izay misy ny lisitry ny mailaka, raha misisika ny rantsan-tànantsika mankany amin'ny ankavia amin'ny mailaka isika safidy maromaro no hiseho: mariho tsy voavaky, mametraha marika fanaraha-maso, alefaso amin'ny mailaka ny mailaka, araho ho spam na hamafa azy ... saika ireo safidy mitovy amin'ny fampiharana mailaka hafa.
Afaka manampy kaonty mailaka marobe, izay hiseho eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery, voalamina anaty tsanganana. Raha te hiditra ny boaty tsirairay dia mila tsindrio fotsiny ilay mailaka tadiavintsika.
Raha miditra amin'ny fikirakirana ny fampiharana isika dia hahita fa afaka manamboatra izany isika mampihetsika fampandrenesana fanosehana (azontsika atao ny manafoana azy ireo), mametraka ny efijery hihodina ho azy, mamaritra ny habaka fitahirizana ambony indrindra ary mametraka sonia ho an'ny mailaka tsirairay.
Te hahafanta-javatra, izay mbola tsy hitako ihany tao amin'ny Blackberry. Ny fampiharana dia navadika ho safidy default amin'ny fa ny mailaka voaray eo anelanelan'ny 21 sy 08 maraina dia tsy ampandrenesina amin'ny feo. Azontsika atao ny manafoana azy io na manova ny fandaharam-potoana.
Tsy manohana kofehin-dresaka Ka raha hanangana resaka amin'ny mailaka ianao dia mety ho sarotra ny mahita ny mailaka rehetra mifandraika amin'ilay lohahevitra. Ny fihoaram-pefy iray hafa, raha te-hiantso azy io isika dia ny manafina ny anaran'ny mpandray azy amin'ny alàlan'ny default, fa azo atao ny manontany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny pitsopitsony.
myMail dia safidy tena tsara hitantanana mailaka amin'ny iDevices.
App mailaka: myMailmaimaim-poana
Fampahalalana bebe kokoa - Ny fampiharana mailaka Boxer dia manampy ny fampidirana Evernote sy ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » myMail fampiharana mailaka tena mahaliana
JOSE LUIS AMADOR dia hoy izy:
Salama, ny marina dia lehibe io app io, saingy te-hanontany fanontanina aho. Maninona aho no mila mampiasa ny feo ho fampandrenesana fa mitondra, ary afaka mampiasa iray hafa tiako ihany ve aho?
Valiny amin'i Jose LUIS AMADOR
iPhone 5 amin'ny halaliny, famaranana
Mamorona mozika amin'ny alàlan'ny hetsika mampiasa ny fitaovanao iOS miaraka amin'ny AUUG